BIZA ABALANDELI BAKAMDLEZANE UKUBA 'BAXHELEKILE' EMVA KWE-CLIFFHANGER YALE VEKI - IDRAMA
Biza abalandeli bakaMdlezane ukuba 'banxunguphele' emva kwe-cliffhanger enokubulala
Biza abalandeli bakaMdlezana basala beshukunyiswa yile mpelaveki ingozi kaloliwe ebuhlungu , eyashiya ubomi babalinganiswa ababini bujinga emngciphekweni.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, amalungu e Biza umsasazi bebethetha ngesiganeko 'esikhulu' esiza kwisizini yangoku esiza kuba neziphumo ezihlala ixesha elide kumdlalo weqonga.
Ngoku siyazi ukuba bebeshiya iingcebiso malunga nale ngozi, apho uDade Julienne (Jenny Agutter), umongikazi uNancy Corrigan (Megan Cusack) kunye noGqr Patrick Turner (Stephen McGann) babanjiswe kuyo.
Tsalela umnxeba ababukeli bakaMdlezane baye kumajelo eendaba ezentlalo ukuze bavakalise inkxalabo yabo, omnye umlandeli wathi: 'Sonke sityale imali kakhulu kubo bonke aba balinganiswa. Akukho namnye unokufa, ndithi kuni, akukho namnye!!'
Yiba ngowokuqala ukufumana iindaba zamva nje zedrama, ngqo kwibhokisi yakho yangaphakathi
Hlala usesikhathini nazo zonke iidrama - ukusuka kwixesha ukuya kulwaphulo-mthetho ukuya kumdlalo ohlekisayo
Omnye waphawula ukuhamba ngethoni kwindlela eqhelekileyo yomboniso, wongeza: 'Nceda ungaguquli uBiza uMdlezana kwi-EastEnders !!'
Okokugqibela, ababukeli abaninzi bagxile kwindlela ukulinda iimpendulo okuqinisekileyo ukuba kuya kuba buhlungu: 'Andiphoswanga sisiqendu esinye seFowunela uMdlezana ukusukela oko yaqalayo kwiminyaka eli-11 eyadlulayo kodwa andizange ndishukunyiswe sisiqendu ngolu busuku. ... ndiza kumelana njani nokulinda isiqendu 8?'
Fowunela ixesha lokubelekisa ixesha le-11 liphela nge-BBC One ngo-8pm ngeCawe nge-20 kaFebruwari 2022. Jonga ngakumbi kumboniso wethu weDrama okanye undwendwele isiKhokelo sethu sikamabonakude ukuze ubone ukuba kuqhubeka ntoni ngokuhlwanje.
ilayishwa nini idayari yam enamafutha
iphuma nini ixbox entsha
uyakwazi ukukhenkceza iyogathi kwismoothies
ubusuku obuhlanu ngokophulwa kokhuseleko lukafreddy ps4
odlala uNate emmerdale
ukuthobela indoda yesigcawu
iyityhefu kwi-perlite ezinjeni